EyoKwindla. Ukukhethwa kwezinto ezintsha | Uncwadi lwangoku
EyoKwindla. Ukukhethwa kwezinto ezintsha
Sifikile ku ukuhamba kwaye inyanga yasentwasahlobo isizisela ezininzi iindaba amanqaku abahleli anomdla. Olu lukhetho lwe Izihloko ezingama-6 yababhali belizwe nabamazwe ngamazwe.
1 Ubusuku obunguNaphakade (i-Black Iceland Series 4) - uRagnar Jónasson
2 IiTides zeGazi (umcuphi uWilliam Monk 24) - u-Anne Perry
3 Izandla ezincinci ezinjalo - uMarina Sanmartín
4 Awusoze ube msulwa-Xavi Barroso
5 Ihlelo leengelosi nguAndrea Camilleri
6 Ityala elibulalayo (u-Inspector Armand Gamache 12) - uLouise Penny
7 Inkumbulo yomthi wew - uMarta Huelves
Ubusuku obungunaphakade (Black Iceland Series 4) – Ragnar Jónasson
URagnar Jónasson ngummi waseIceland kunye negqwetha kunye nombhali, kwaye kangangexesha elithile ngoku, uye waba ngomnye. umbhali ophawulekayo we-nordic kuhlobo olumnyama. Oku kuboniswa yi mpu melelo kuthotho lwakhe edlala nepolisa Ari Thor, esele isiya kwesi sihloko sesine. UJónasson wayelapha kwiminyaka eyi-3 eyadlulayo, kumnyhadala we-Getafe Negro.
Kweli bali litsha uAri Thór uya kuba noxanduva lokuphanda ityala elidibanisa langoku nelidlulileyo xa befumana Umzimba ofileyo emazantsi ewa, eKálfshamarsnes, isiqwenga somhlaba esikumantla eIceland. Eso sidumbu sibonakala kanye kwindawo enye apho, kwiminyaka engamashumi amabini anesithandathu ngaphambili, unina nodade wabo omncinane baphulukana nobomi babo kwiimeko ezingaqhelekanga.
amaza egazi (Umcuphi uWilliam Monk 24) - Anne Perry
UAnn Perry uthathwa njenge uvictorian ubugebenga ukumkanikazi kwaye ngesi sihloko ugqibezela isaga yakhe esele iyintsomi, edlala uMlawuli UWilliam Monk.
Kweli bali lokugqibela, uMonk ujongene nento ebonakala ingenakwenzeka: i ku tshutshiswa komnye wamadoda akhe. Kuya kwenzeka ngokuphanda ukubiwa yomfazi kaHarry Exeter, umakhi onamandla kunye nobutyebi baseLondon. Abaqweqwedisi bafuna ukuba ukuhanjiswa kwexhoba ngokutshintshiselana nentlawulelo kwenziwe kwenye yezona ndawo zikude kunxweme loMlambo iThames. I-Monk ijongene nokulawula ukusebenza, kodwa xa befika bawela kwi-a ukulalela ukuba kungekudala baya kuqinisekisa ukuba kukungcatsha komnye wamadoda abo. Ukufumanisa umenzi wobubi, kuya kufuneka ujonge kwixa elidlulileyo lomntu wonke.
izandla zincinci kakhulu – Marina Sanmartin
Sinokufumana uMarina Sanmartín yonke imihla Cervantes kunye nentsebenziswano., ivenkile yeencwadi eCalle del Pez yaseMadrid. Kwaye ngoku ubonisa inoveli entsha emnyama-mnyama esetwe ekwindla Tokio yangoku.
apho yenanjengezandla womdanisi oselula nodumileyo Aya Noriko zivela kwindawo encinci yokulwa nenyikima phakathi kwezakhiwo ezibini ezikufutshane nezitiya zeRoyal Palace kunye nehotele apho umtshato owenziwe ngumbhali wenoveli yolwaphulo-mthetho usanda kufudukela khona. UOlivia Galvan kunye noNjingalwazi woLudwe loLulekiso Cesar Andrade. Kukwakho nemfihlakalo pista: idayimani kunye nerubhi, eza kukhomba kuyo kungekudala Cesar njengengundoqo erhanelekayo.
imbali iyasixelela UOlivia Galván kumntu wokuqala Kwangaxeshanye ebalekela kubuhlobo bakhe obuqalayo nonozakuzaku uGonzalo Marcos, umcebisi we-Embassy yaseSpain eJapan.
soze ube msulwa – Xavi Barroso
Emva koko Indlela yokukhohlisa, Xavi Barroso usibuyisela kwi-Barcelona ye-1917, apho uMateu Garriga, emva kokubulawa komama wakhe, wamkelwa, kunye nomntakwabo uGabriel, yintsapho kamalume wakhe u-Ernest. Bobabini baya kukhula kwi-Barcelona exhuzulayo kwaye baya kwenza ikamva labo njengabasebenzi kumzi-mveliso welaphu. UGabriel uya kubhanxa kunye nemibutho yabasebenzi kunye namaqela anobundlobongela, kwaye uMateu uya kuzifumana ebandakanyeka kwingxaki ethile eya kumkhokelela ekubeni enze ulwaphulo-mthetho olubi kwaye ekugqibeleni abe ngumpu.
ihlelo lezithunywa zezulu - UAndrea Camilleri
UAndrea Camilleri, owasishiya kwiminyaka emithathu edlulileyo, wayesekelwe kwinyani yembali yeli yelenqe yenoveli yolwaphulo-mthetho, apho isigqebelo sakhe sesiqhelo singasileli.
SiseSicily ngo-1901 kwaye isibetho sekholera sihlasela idolophu yasePalizolo, abemi bayo aboyikayo babeka ityala ngeziganeko ezicacileyo ezingenakuchazwa. Kuya kuba ngummeli othobekileyo ogama linguMatteo Teresi ogxeka kumaphepha ephephandaba lakhe ubugebengu beqela lamadoda anamandla, azibiza ngokuthi "ihlelo leengelosi."
ityala elibulalayo (Umhloli uArmand Gamache 12) – Louise Penny
Umbhali odumileyo waseKhanada usizisela isihloko esitsha esineenkwenkwezi I-Armand gamache, ngubani ngoku, njengomphathi omtsha we-academy ye Ukhuseleko, ingalwa urhwaphilizo nenkohlakalo eye yanwenwa njengesibetho kulo mkhosi wamapolisa. Kodwa emva kokufumana wabulawa owayesakuba ngugxa wakhe kunye nonjingalwazi kwiziko lemfundo, kunye nemephu engaqondakaliyo, uGamache uya kujongana urhano ukuba awe phezu kwakhe kunye uthotho mfihlelo etshabalalisayo.
Inkumbulo ye yew -uMarta Huelves
UMarta Huelves wafunda IJografi kunye neMbali e-UNED kwaye ungumbhali kunye nomsasazi weMbali. Ngoku ngale noveli iqala ngqa kwi isini esimnyama.
Singaphakathi IiColombres, ikomkhulu lebhunga laseRibadedeva, kwaye apho ubomi obuzolileyo be UBertha Vega ithatha inguqu emandla xa baxhwila intombi yakhe iiyure ezingamashumi amane anesibhozo emva koko wakhulula umgama ongaphezu kwekhulu leekhilomitha ukusuka ekhaya. Yonke into iba nzima xa kukho a ukuxhwilwa okwesibini oko kubeka amapolisa eluvavanyweni kwaye kufunyaniswe unxibelelwano phakathi kokunyamalala kolutsha olufikisayo kunye a isiganeko oko kwenzeka eMadrid kwiminyaka engamashumi amabini anesihlanu eyadlulayo.
La Umhloli uRoldan, yeGijón National Police, kunye ne umkhandi waseKapa, ukusuka kwi-Civil Guard yase-Colombres, baphethe ityala kwaye banexabiso elixabisekileyo pista: into efunyenwe egazini lamaxhoba, eyi ihallucinogen isetyenziswe ukususela kumaxesha amandulo kwaye ikhutshwe kumthi we-yew.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » EyoKwindla. Ukukhethwa kwezinto ezintsha
UMarina Sanmartin. Udliwano-ndlebe nombhali we-Sole Small Hands
Isishwankathelo sencwadi yobuxoki